Igama lesiqhelo: nevirapine (ne VYE ra peen)
Igama lebrand: IViramune, iViramune XR
Iifom zedosi: ukunqunyanyiswa ngomlomo (50 mg / 5 ml); ithebhulethi yomlomo (200 mg); ithebhulethi yomlomo, ukukhutshwa okwandisiweyo (100 mg; 400 mg)
Udidi lweziyobisi: IiNNRTIs
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngo-Epreli 6, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
INevirapine liyeza elithintela intsholongwane ( Intsholongwane kaGawulayo ekuphindaphindweni komzimba wakho.
INevirapine isetyenziselwa ukunyanga i-HIV, intsholongwane enokubangela ukuba ifunyanwe i-immunodeficiency syndrome (i-AIDS). INevirapine ayinyangi i-HIV okanye i-AIDS, kwaye akufuneki isetyenziselwe ukuthintela i-HIV.
Isisombululo somlomo seNevirapine (ulwelo) sisetyenziselwa abantu abadala kunye nabantwana abancinci kangangeentsuku ezili-15 ubudala. Iipilisi zokukhupha ezandisiweyo zeNevirapine zisetyenziselwa abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka emi-6 ubuncinci.
INevirapine inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo samayeza.
inja ingathatha i-benadryl
Igazi lakho liyakufuna ukuvavanywa rhoqo kwiinyanga ezimbalwa zokuqala uthatha i-nevirapine.
INevirapine inokubangela iingxaki zesibindi ezinzima okanye ezibulalayo. Yeka ukuthatha i-nevirapine kwaye ubize ugqirha ngoko nangoko ukuba unayo: isicaphucaphu Ukuphelelwa ngumdla, isisu esibuhlungu, ukudinwa, umkhuhlane, iintlungu ezingachazwanga okanye ubuthathaka, umchamo omnyama, izitulo ezinombala wodongwe, okanye inyongo (ukutyheli kolusu okanye kwamehlo).
INevirapine inokubangela ulusu ukuba lusabele ngokuqatha okanye ngokusongela ubomi. Yeka ukuthatha i-nevirapine kwaye ufumane uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba: umkhuhlane, ukudumba ebusweni okanye kulwimi, iintlungu kulusu, okanye irhashalala elisasazekayo kwaye libangele ukudumba nokuxobuka.
Akufanele ulisebenzise eli yeza xa uxabisa i-nevirapine, okanye ukuba unesifo esiqatha sesibindi.
Amanye amayeza angadibana ne-nevirapine kwaye akufuneki isetyenziswe ngaxeshanye. Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha isicwangciso sakho sonyango ukuba usebenzisa naliphi na kula machiza alandelayo:
Wort yaseSt ; okanye
Ukuqinisekisa ukuba i-nevirapine ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba:
isifo sesibindi (okanye imbali ye-hepatitis okanye ukuqina kwesibindi );
isifo sezintso (okanye ukuba uku dialysis); okanye
ukuba ukhe wathatha i-delavirdine okanye efavirenzi kwaye khange zisebenze ekunyangeni imeko yakho.
Akwaziwa nokuba eli yeza liza kulwenzakalisa usana olungekazalwa. Nangona kunjalo, i-nevirapine inokuba sesichengeni sokubangela ukonakala kwesibindi kumfazi okhulelweyo. Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa. INTSHOLONGWANE KAGAWULAYO ​​inokudluliselwa kusana lwakho ukuba awunyangeki kakuhle ngexesha lokukhulelwa. Thatha onke amayeza akho e-HIV njengokuyalelwa ukulawula usulelo lwakho.
Ukuba ukhulelwe, igama lakho linokudweliswa kwirejista yokukhulelwa. Oku kukulandela iziphumo zokukhulelwa kunye nokuvavanya naziphi na iziphumo ze-nevirapine emntwaneni.
INevirapine inokwenza iipilisi zokulawula inzala ingasebenzi kakuhle. Buza ugqirha wakho malunga nokusebenzisa ulawulo lokuzalwa olungenalo ihomoni (ikhondom, uvalo nge-spermicide) ukukhusela ukukhulelwa.
Abasetyhini abane-HIV okanye i-AIDS akufuneki bancancise usana. Nokuba usana lwakho luzelwe lungenayo i-HIV, intsholongwane inokudluliselwa emntwaneni kubisi lwakho lwebele.
Musa ukunika eli yeza emntwaneni ngaphandle kwengcebiso yezonyango.
Ndingayithatha njani i-nevirapine?
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho kagqirha. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho. Sukusebenzisa i-nevirapine ngezixa ezikhulu okanye ezincinci okanye ixesha elide kunokuba kucetyisiwe. Ukuqala ngedosi esezantsi kunokunciphisa umngcipheko wokuphendula kolusu.
Landela ngononophelo imiyalelo kagqirha wakho malunga nokuba ulithatha kangaphi eli yeza.
INevirapine kufuneka inikezwe ngokudibeneyo namanye amayeza antiviral kwaye akufuneki isetyenziswe yodwa.
INevirapine ingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
Sukutyumza, ukuhlafuna, okanye wophule Ithebhulethi ekhutshwa ixesha elide . Yiginye yonke.
Shukumisa i ukumiswa ngomlomo (ulwelo) kakuhle ngaphambi kokuba ulinganise idosi. Linganisa iyeza elingamanzi kunye nesirinji enikezelweyo, okanye ngecephe lokulinganisa idosi okanye ikomityi yeyeza. Ukuba awunaso isixhobo sokulinganisa idosi, buza ikhemesti yakho enye.
Ngelixa usebenzisa i-nevirapine, uyakufuna uvavanyo lwegazi rhoqo (ngakumbi kwiiveki ezili-18 zokuqala zonyango).
Sebenzisa i-nevirapine rhoqo ukufumana olona loncedo. Fumana iyeza lakho lizaliswe ngaphambi kokuba uphelelwe ngamayeza ngokupheleleyo.
Biza ugqirha wakho kwangoko xa uqala uphawu lwayo nayiphi na irhashalala , nokuba ubumnene kangakanani.
Intsholongwane kaGawulayo / uGawulayo ihlala inyangwa ngokudibanisa iziyobisi. Sebenzisa onke amayeza ngokomyalelo kagqirha wakho. Funda isikhokelo sonyango okanye imiyalelo yesigulana enikwe iyeza ngalinye. Sukutshintsha iidosi okanye ishedyuli yamayeza ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho. Wonke umntu oneNTSHOLONGWANE KAGAWULAYO ​​okanye uGawulayo kufuneka ahlale phantsi kolawulo lukagqirha.
Ukuba awuthathanga i-nevirapine kangangeentsuku ezisi-7 zilandelelana, tsalela umnxeba ugqirha wakho phambi kokuba uqale kwakhona ukuthatha iyeza. Kuya kufuneka ukuba uqale ngomthamo osezantsi.
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-nevirapine?
Kuphephe ukusela utywala. Inokunyusa umngcipheko wokulimala kwesibindi.
Ukuthatha la mayeza akuyi kukuthintela ukuba ungadluliseli i-HIV kwabanye abantu. Sukulala ungakhuselekanga okanye wabelane ngeencakuba okanye ngebrashi zamazinyo. Thetha nogqirha wakho ngeendlela ezikhuselekileyo zokuthintela ukosulelwa yi-HIV ngexesha lokwabelana ngesondo. Ukwabelana ngeenaliti zeziyobisi okanye amayeza akukaze kukhuseleke, nakumntu osempilweni.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeNevirapine
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu uxabane: intlungu edibeneyo okanye yemisipha, umkhuhlane, izilonda zomlomo, ukudumba ebusweni, ukudumba kolusu, iimpawu zomkhuhlane, amadlala adumbileyo, ukuziva ubuthathaka okanye udiniwe, ukurhawuzelela kakhulu okanye ukuba ndindisholo , iintlungu okanye ukutshisa xa uchama, ukudumba emilenzeni okanye ezinyaweni, ukukhohlela, iintlungu esifubeni, ukukhathaza ukuphefumla, okanye ukudumba kwimilebe yakho, ulwimi, okanye umqala.
INevirapine inokubangela iziphumo ezisongela ubomi esibindini, ingakumbi kwabasetyhini. Fowunela ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo nayiphi na kwezi mpawu zesibindi ngelixa uthatha i-nevirapine: isicaphucaphu, ukuphelelwa ngumdla, iintlungu zesisu, ukudinwa, umkhuhlane, iintlungu ezingachazwanga zezihlunu okanye ubuthathaka, umchamo omnyama, izitulo ezinombala wodongwe, okanye i-jaundice ulusu okanye amehlo).
INevirapine inokubangela ukuba ibe qatha okanye ulusu olusongela ubomi. Yeka ukuthatha i-nevirapine kwaye ufumane uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba: umqala obuhkungu , ukudumba ebusweni okanye kulwimi lwakho, ukutshisa emehlweni akho, iintlungu zesikhumba, kunye nerhashalala elibomvu okanye limfusa isikhumba esisasazekayo kwaye sibangele ukudumba nokuxobuka. Olu hlobo lokuphendula ngxamisekileyo kwezonyango.
INevirapine inokuwunyusa umngcipheko wosulelo oluthile okanye Ukuphazamiseka komzimba ngokutshintsha indlela amajoni akho omzimba asebenza ngayo. Iimpawu zinokwenzeka kwiiveki okanye kwiinyanga emva kokuba uqale unyango nge-nevirapine. Tshela ugqirha wakho ukuba unayo:
iimpawu zosulelo olutsha - umkhuhlane, ukubila ebusuku amadlala adumbileyo, izilonda zomlomo, urhudo , isisu esibuhlungu, ukuhla ukusinda ;
iintlungu zesifuba (ngakumbi xa uphefumla), ukukhohlela owomileyo, ukuphefumla, ukuziva uphefumla kancinci;
izilonda ezibandayo izilonda kwilungu lakho lobufazi okanye lendunu;
ukukhawuleza kwentliziyo, ukuziva uxhalabile okanye ucaphuka, ubuthathaka okanye uvakalelo, iingxaki ngokulinganisela okanye ukuhamba kwamehlo;
ukukhathazeka ukuthetha okanye ukuginya, iintlungu ezisezantsi ezisezantsi, ukulahleka kwesinyi okanye ukulawula amathumbu; okanye
ukuvuvukala entanyeni yakho okanye emqaleni (ukwandiswa kwe-thyroid), utshintsho lokuya esikhathini, ukungabi namandla , Ukuphelelwa ngumdla kwisini.
Utshintsho kubume okanye kwindawo yamafutha omzimba (ngakumbi ezingalweni, emilenzeni, ebusweni, entanyeni, emabeleni nasinqeni).
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-nevirapine?
Amachiza amaninzi anokusebenzisana ne-nevirapine, okanye ayenze ingasebenzi kakuhle. Ayisilo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe apha. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nayiphi na into oqala ngayo okanye uyeke ukuyisebenzisa, ngakumbi:
amayeza antiviral ukunyanga ihepatitis C;
an isibulali zintsholongwane okanye iyeza lokubola;
iipilisi zokulawula ukuzalwa okanye unyango ngamadlala;
igazi elincinci ( iwarfarin nabanye);
amayeza ergot (dihydroergotamine, ergonovine, kunye nabanye);
intliziyo okanye unyango lwegazi;
amayeza okuthintela ukwaliwa komzimba; okanye
Olu luhlu alugqitywanga kwaye ezinye iziyobisi zinokusebenzisana ne-nevirapine. Oku kubandakanya amayeza amayeza kunye nalawo e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Nika uluhlu lwawo onke amayeza akho kuye nawuphi na umboneleli wezonyango okunyangayo.
Ngaba iNevirapine iyanxibelelana nezinye iziyobisi?
iziphumo ebezingalindelekanga ze-clonidine 0.1 mg
Ipilisi yokutya ipilisi ye-phentermine
Ngaba ukucacisa kukwenza wozele
Uluhlu lwee-calcium channel blockers
igama lesiselo sokulungiselela i-colonoscopy
iziphumo ebezingalindelekanga ze-superoxide